रोकिएन बलात्कारको शृंखला: फेरी अर्की ५ वर्षीय बालिका बलात्कृत
चैत १०, २०७४ BNNTV
काठमाडौँ । बर्दिया जिल्लामा एक ५ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक १७ वर्षीय युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
जिल्लाको चैतबढैयाताला गाउँपालिका–७ का कृष्ण थारुले ५ वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राऊ गरेको हो । गत बिहिबार थारुले बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको भन्दै आफन्तहरुले उजुरी गरेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको बताएको छ ।
अहिले घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान कार्य भैरहेको प्रहरीले बताएको छ। शनिबार यता बर्दियाका विभिन्न ठाउँमा बलात्कारका चारवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसबाहेक अझै केहि घटनाहरु बाहिर आएको र मुद्धा दर्ता हुने क्रममा रहेको बर्दिया प्रहरीले हानेको छ।
प्रकाशित : शनिबार, चैत १०, २०७४११:५४
बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्डको बेलीव्रिजमा प्वलै प्वाल
एसिया प्यासिफिक समिटमा भाग लिन काठमाडौँ आइपुगे कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री सेन !
कपिल वस्तुमा ३०० बिघा भन्दा बढी जमिन डुबानमा
चिसोमा ताप्न बालेको आगो निभाउन बिर्सिदा आमासहित दुई बालकको मृत्यु !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे तीन मन्त्री नियुक्त, विद्यादेवी भण्डारीले शपथग्रहण गराउने !
विद्यार्थीमाथि अपशब्द बोल्दै हातपात गर्ने दुई शिक्षक निलम्बनमा !
१२ सेकेन्ड अगाडि बिगुल
Marketing: [email protected]bigulnews.com